Bernie Sanders no nokendren’ireo Rosiana mpanao sangy ratsy · Global Voices teny Malagasy
Vovan & Lexus nisandoka ho Greta Thunberg niantso ny senatora Vermont
Voadika ny 23 Avrily 2020 18:02 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Vovan sy Lexus ao amin'ny Youtube, mikasika ny antso vazivazin'izy ireo nifanaovana tamin'ny Senatora Amerikàna Bernie Sanders.
Ao anatin'ny hafanana mivaivain'ny savaranonando Demokratikan'ny Amerikàna, toa ny Senatera Bernie Sanders no mpanao politika iraisam-pirenena farany, niharan'ny vazivazin'ireo rosiana mpanao sangy ratsy, Vovan sy Lexus, anaram-bositr'i Vladimir Kuznetsov sy Alexey Stolyarov. Tsy mbola naneho hevitra momba ilay antso vazivazy akory ny biraon'ny fampielezankevitry ny Senateran'i Vermont mba hanamafisana ny maha-izy azy.
Ny 13 Febroary, horonantsary iray no nalefa teo amin'ny fantsona YouTube an'ireo mpanao sangy ratsy miaraka amin'ny feon'ilay antso 11 minitra an'i Sanders, izay niheverany fa i Greta Thunberg sy ny rainy Svante no niresaka taminy. Nidera ireo sosokevitra momba ny tontolo iainana natolotr'ilay senatera i “Greta” ary nampiseho fa hanome ny fanohanany azy amin'ny fampielezankevitra mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena. Tsy ela dia nanjary hafahafa ilay lahatsary rehefa nandroso hevitra ireo mpanao sangy ratsy fa ho azon'i Sanders ny vaton'ireo tanora raha toa izy milalao anaty lahatsarina rap iray miaraka amin'i Kanye West sy Billie Eilish. Nihomehy tamin'ny fony ilay Senatera tamin'ny hevitra hoe tokony hitondra firavaka volamena izy.
Tsy nila fotoana ela i Rosia mba hisongadinana tao anatin'ilay antso, rehefa naneho an'ireo tebitebiny i “Greta” sy ny rainy, mikasika ny diany manaraka ho ao amin'ny firenena ka mangataka torohevitra amin'i Sanders. Namaly azy ny Senatera fa “raha ny tena fahalalana[ny], tena tsy misy hain'i Poutine ny mikasika ny fiovan'ny toetrandro”, mampitandrina azy ireo amin'ny “fitsangatsangana any fotsiny sy ho ampiasaina ho toy ny fanararaotra hakàna sary”, ary nanoro hevitra azy ireo mba hikaroka ny toetoetry tontolo ekôlojika ao Rosia sy hamporisika ireo Rosiana mpitondra mba “hanovàna ny rafitry ny angovon'izy ireo”.
Nanontaniana i Sanders avy eo raha toa heveriny fa azo atao ny “hitarihana an'i Etazonia hankany amin'ny kaominisma”, izay novaliany fa ny sosialisma demokratika dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fitantanana ao Soeda raha oharina amin'ny tao amin'ny Firaisana Sovietika.
Avy eo niha nihendanja ny fandehan-javatra rehefa nasehon'i “Greta” sy ny rainy ny fahalinan'izy ireo tamin'ilay fitsidihan'i Sanders ilay tanànan'i Yaroslavl ao Rosia, tamin'ny taona 1988. Nanome soso-kevitra niaro hanihany izy ireo hoe mpiasa miandry baikon'ny KGB izy, ilay polisy miafina an'ny sovietika, izay namafa ny fitadidian'ilay senatera sao sanatria ka ho fantatry ny CIA ny marina. “Tena izay mihitsy ve no inoanareo? hoy i Sanders, tsy nino. Mamaly i “Greta” fa izao fotoana ho azy handonany aminà fehezanteny manokana. Tapaka tampoka ilay antso.
Tsy fantatra hoe oviana i Vovan sy Lexus no nandrakitra ny antson'izy ireo farany, saingy tao anaty bitsika iray dia nanisy teny tsy loabody momba ny sangy ratsy iray niarahana tamin'i Sanders izy ireo, taloha kelin'ny nivoahan'ilay izy:
Tokony hanao sangy ratsy amin'i Bernie Sanders ve isika?
Raha toa ka tena an'ilay senatera tokoa ny feo, dia Sanders no mpanao politika voalohany nohanihanian'i Vovan ary tsy ho ny farany ihany koa. Tamin'ny Janoary, nampiasain'izy ireo ihany koa io fihetsika io tamin’i Maxine Waters, vehivavy avy ao California mpikambana ao amin'ny Kaongresy, avy eo tamin'ny antso iray natao an'ilay mpilalao Joaquin Phoenix. Nanjary fanta-daza iraisam-pirenena izy roa tonta ireo tamin'ny 2015, rehefa niantso an-telefona an'i Elton John izy ireo ary nilaza fa hoe Vladimir Putin – noheverin'ilay mpihira fa ny filoham-pirenena rosiana ilay niresahany, nandalo taminà mpandika teny.
Itrikitrihan'ireo mpisangy ratsy ireo ny tsy fananan-dry zareo fandaharanasa politika, tamin'ny fanindriany fa nanaovana izany koa ireo olo-malaza. Na izany aza, tsy afaka niala tamin'ny fifantohan'ireo media iraisam-pirenena ny toa nifanandrifian'ny nisafidianan'izy ireo an'ireo olona nokendreny tamin'ireo olona ao anatin'ilay boky ratsin'i Kremlin – indrindra fa rehefa Okraniana mpanao politika sy tandrefana mpiasam-panjakana heverina ho tsy mifanaraka amin'ireo tombontsoa rosiana izy ireny. Anisan'ireny ny Filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron, ny Filoham-panjakana Okraniana teo aloha Petro Poroshenko, ny Praiminisitra Makedoniana Tavaratra Zoran Zaev, ny Filoham-panjakana Tiorka Recep Tayyip Erdoğan, ny Governora an'i Alaska Sarah Palin, ireo oligarka Okraniana Ihor Kolomoiskyi sy Rinat Akhmetov (olombitsy mitàna ny fahefana), ary ireo hafa marobe. Nampisy sahoan-dresaka betsaka mikasika ny fomba nahafahan'ireo roa mpanao sangy ratsy ireo niantso sy niresaka mora foana mivantana tamin'ireo Filoham-panjakana vahiny – izay nitarika ny sasantsasany hiahiahy, sahala amin'ilay mpisolovava Mark Feygin, hoe mety mahazo tolo-tanana avy amin'ireo sampandraharaha fiarovana Rosiana ry zareo ireo.
Nihomehezan'ireo mpananihany izay sosokevitra izay, saingy nanontaniana azy ireo imbetsaka hoe nahoana izy ireo na indray mandeha monja aza no tsy nanao vazivazy ratsy niantso an'i Poutine. Tamin'ny janoary 2019, tao anatina tafatafa iray nifanaovana tamin'ilay vovonam-baovao Okraniana Strana Ua, nohamafisin'izy ireo fa fantatr‘i Poutine hoe iza izy ireo, sady notanisain'izy ireo ny olana ara-teknika amin'ny fahazoana azy:
Tsy mora no miantso an'i Poutine. Manana fomba firesaka tena mifanohitra i Poutine sy ireo mpitondra fanjakana hafa maro. Voalohany indrindra aloha, tsy manana telefona i Poutine. Misy fomba fanafenana daholo ireo fantsona izay hiresahany. Raha miresaka an'ireo Fanjakana an'ny CEI isika, dia samy manana ny fomba fifandraisany misy fanafenana avokoa ny filoha tsirairay. Raha ny teorika, na dia maniry izany aza izahay, tsy ho afaka ny hahazo azy ireo.
Tao anaty tafatafa iray tamin'ny Martsa 2016 niarahana tamin'ny BBC amin'ny fiteny Rosiana, nisokatra kokoa i Lexus mikasika ny fisalasalàn'izy ireo:
Kendrenay anefa ny hanao izay mety ho an'i Rosia. Tsapanay fa ireo fandraketana sasantsasany, anisan'izany ireo fandraketana fiampangàna, dia mety hampidi-doza ho an'ny firenenay; hilalao azy ireny ireo hery politika hafa ary hahazo tombony. Mino izahay fa ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly sy ireo hafa dia tsy maintsy hanohitra na ahoana na ahoana. Saingy ny tranga tsirairay avy tena misy dia tsy maintsy lanjalanjaina mba tsy hangirifiry ara-politika amin'izany ny firenena.
Tsy hisalasalàna ny hitohizan'ireo fanontaniana mikasika ny fikasan'i Vovan sy Lexus – mandrapaha sy raha tsy hoe ireo mpanao vazivazy ratsy no tena ho sahisahy foana amin'ny fikasàna handrokindroky rosiana mpanao politika malaza iray.